Search တရုပ်ဖူးကား - BajarFB.com
Search Results - တရုပ်ဖူးကား
နံပါတ်​ 1 နဲ့ ​အောင်​မြင်​လာတဲ့ Goosebumps ဟာ အခုနံပါတ်​2ဆက်​လက်​ထွက်​ရှိလာပါတယ်​။ နံပါတ်​ 1 မှာ​တော့ စာအုပ်​ထဲက သရဲ​တွေ ထွက်​လာတာဖြစ်​ပြီး နံပါတ်​2ရဲ့ ဇာတ်​လမ်း​လေးက​တော့ ဒီလိုဗျ။ နီကိုလတ်​စ်​ တက်​စ်​လာရဲ့ မြို့​လေးဖြစ်​တဲ့ ဝါဒန်​ကလိုက်​ဖ်​မှာ အမှိုက်​ညီ​နောင်​များလို့ သူတို့ကိုယ်​သူတို့​ခေါ်တဲ့ ဆိုနီနဲ့ ဆမ်​ဆိုတဲ့ သူငယ်​ချင်းနှစ်​​ယောက်​ရှိပါတယ်​။ သူတို့ဟာ အမှိုက်​​ဟောင်း​တွေကို ​လိုက်​ရှင်းပြီး​တော့ ရတနာပစ္စည်း​တွေ​တွေ့လာမယ်​လို့ စိတ်​ကူးယဉ်​​နေတဲ့ ခ​လေးနှစ်​​ယောက်​ပဲ ဖြစ်​ပါတယ်​။ တစ်​​နေ့မှာ​တော့ အမှိုက်​ညီ​နောင်​ထံကို ဖုန်းဝင်​လာပြီးတဲ့​နောက်​မှာ ဖုန်းထဲက လိပ်​စာ​နောက်​လိုက်​ရင်း လူသူစွန့်​ပစ်​ထားတဲ့ အိမ်​ပျက်​ကြီးတစ်​ခုဆီ ​ရောက်​လာကြပါတယ်​။ အဲဒီ့​ကြောက်​စရာ​ကောင်းတဲ့ အိမ်​ပျက်​ကြီးကို ရှင်းလင်းရင်းနဲ့ အမှတ်​မထင်​ ​သေတ္တာတစ်​လုံးက်ို ​တွေ့ရှိခဲ့ပြီး ရတနာပစ္စည်း​တွေ ပါမယ်​လို့ ​မျှော်​လင့်​ပြီး အားရပါးရဖွင့်​လိုက်​​ပေမယ့်​ အထဲမှာ စာအုပ်​​လေးတစ်​အုပ်​သာ ​သော့ခတ်​လျက်​ရှိ​နေတာကို ​တွေ့ရပါတယ်​။ မကြာမှီမှာပဲ စာအုပ်​​လေးနားမှာ ဆလပ်​ပီလို့​ခေါ်တဲ့ အရုပ်​တစ်​ရုပ်​​ပေါ်လာခဲ့ပြီး ဆလပ်​ပီကသူ့အစွမ်း​တွေနဲ့ ဆမ်​နဲ့ ဆိုနီရဲ့အခက်​အခဲ​တွေကို ကူညီ​ပေးခဲ့ပါတယ်​။ ဒါ​ပေမယ့်​ တစ်​ဖြည်းဖြည်းနဲ့ ဆလပ်​ပီရဲ့ အမူအယာနဲ့ အပြုအမူ​တွေ ​ပြောင်းလဲလာတဲ့အခါမှာ​တော့ ဝါဒန်​ကလိုက်​ဖ်​မြို့​လေးရဲ့ ​ဟောလိုးဝင်းပွဲ​တော်​က ဘယ်​လို​ပြောင်းလဲသွားမယ်​၊ ဆမ်​၊ ဆိုနီနဲ့ အမဖြစ်​သူ ဆာရာတို့က ဆလပ်​ပီ့ကို ဘယ်​လိုတားဆီးရင်​ဆိုင်​ကြမယ်​၊ goosebump2ရဲ့ အဆုံးသတ်​က​ရော ဘယ်​လိုဇာတ်​သိမ်းမယ်​ဆိုတာကို​တော့ ဇာတ်​လမ်း​ကောင်း​လေးမို့ အ​သေးစိတ်​မ​ပြောပြ​တော့ဘူး​နော်​။ ​ကိုယ်​တိုင်​သာ ကြည့်​ရှုရင်း ခံစားလိုက်​ကြပါ​တော့ဗျာ... #CRDCM ကိုယ်လည်းမကြည့်ရသေးဘူး Bill ပေါသူများကြည့်ရအောင်တင်ပေးတာပါ...
နံပါတ်​ 1 နဲ့ ​အောင်​မြင်​လာတဲ့ Goosebumps ဟာ အခုနံပါတ်​2ဆက်​လက်​ထွက်​ရှိလာပါတယ်​။ နံပါတ်​ 1 မှာ​တော့ စာအုပ်​ထဲက သရဲ​တွေ ထွက်​လာတာဖြစ်​ပြီး နံပါတ်​2ရဲ့ ဇာတ်​လမ်း​လေးက​တော့ ဒီလိုဗျ။ နီကိုလတ်​စ်​ တက်​စ်​လာရဲ့ မြို့​လေးဖြစ်​တဲ့ ဝါဒန်​ကလိုက်​ဖ်​မှာ အမှိုက်​ညီ​နောင်​များလို့ သူတို့ကိုယ်​သူတို့​ခေါ်တဲ့ ဆိုနီနဲ့ ဆမ်​ဆိုတဲ့ သူငယ်​ချင်းနှစ်​​ယောက်​ရှိပါတယ်​။ သူတို့ဟာ အမှိုက်​​ဟောင်း​တွေကို ​လိုက်​ရှင်းပြီး​တော့ ရတနာပစ္စည်း​တွေ​တွေ့လာမယ်​လို့ စိတ်​ကူးယဉ်​​နေတဲ့ ခ​လေးနှစ်​​ယောက်​ပဲ ဖြစ်​ပါတယ်​။ တစ်​​နေ့မှာ​တော့ အမှိုက်​ညီ​နောင်​ထံကို ဖုန်းဝင်​လာပြီးတဲ့​နောက်​မှာ ဖုန်းထဲက လိပ်​စာ​နောက်​လိုက်​ရင်း လူသူစွန့်​ပစ်​ထားတဲ့ အိမ်​ပျက်​ကြီးတစ်​ခုဆီ ​ရောက်​လာကြပါတယ်​။ အဲဒီ့​ကြောက်​စရာ​ကောင်းတဲ့ အိမ်​ပျက်​ကြီးကို ရှင်းလင်းရင်းနဲ့ အမှတ်​မထင်​ ​သေတ္တာတစ်​လုံးက်ို ​တွေ့ရှိခဲ့ပြီး ရတနာပစ္စည်း​တွေ ပါမယ်​လို့ ​မျှော်​လင့်​ပြီး အားရပါးရဖွင့်​လိုက်​​ပေမယ့်​ အထဲမှာ စာအုပ်​​လေးတစ်​အုပ်​သာ ​သော့ခတ်​လျက်​ရှိ​နေတာကို ​တွေ့ရပါတယ်​။ မကြာမှီမှာပဲ စာအုပ်​​လေးနားမှာ ဆလပ်​ပီလို့​ခေါ်တဲ့ အရုပ်​တစ်​ရုပ်​​ပေါ်လာခဲ့ပြီး ဆလပ်​ပီကသူ့အစွမ်း​တွေနဲ့ ဆမ်​နဲ့ ဆိုနီရဲ့အခက်​အခဲ​တွေကို ကူညီ​ပေးခဲ့ပါတယ်​။ ဒါ​ပေမယ့်​ တစ်​ဖြည်းဖြည်းနဲ့ ဆလပ်​ပီရဲ့ အမူအယာနဲ့ အပြုအမူ​တွေ ​ပြောင်းလဲလာတဲ့အခါမှာ​တော့ ဝါဒန်​ကလိုက်​ဖ်​မြို့​လေးရဲ့ ​ဟောလိုးဝင်းပွဲ​တော်​က ဘယ်​လို​ပြောင်းလဲသွားမယ်​၊ ဆမ်​၊ ဆိုနီနဲ့ အမဖြစ်​သူ ဆာရာတို့က ဆလပ်​ပီ့ကို ဘယ်​လိုတားဆီးရင်​ဆိုင်​ကြမယ်​၊ goosebump2ရဲ့ အဆုံးသတ်​က​ရော ဘယ်​လိုဇာတ်​သိမ်းမယ်​ဆိုတာကို​တော့ ဇာတ်​လမ်း​ကောင်း​လေးမို့ အ​သေးစိတ်​မ​ပြောပြ​တော့ဘူး​နော်​။ ​ကိုယ်​တိုင်​သာ ကြည့်​ရှုရင်း ခံစားလိုက်​ကြပါ​တော့ဗျာ... #CRDCM ကိုယ်လည်းမကြည့်ရသေးဘူး Bill ပေါသူများကြည့်ရအောင်တင်ပေးတာပါ... Khant Thet Paing Hein 17 Dec 2018 · 45K views
ဒီဇာတ်​ကားဟာ လက်​ရှိမြန်​မာနိုင်​ငံအ​ရေး ​ပေါ်​ပေါ်ထင်​ထင်​ရို​တ်​ကူးထားခဲ့သည်​
ဖြစ်​ရပ်​မှန်​ ဇာတ်​ကား မြန်​မာအ​ရေး Saw Thu Ra Kyaw Htwe 25 Oct · 1.6K views
CCTV မှတ်​တမ်းထဲမှာ ကျန်​ရှိ​နေခဲ့တဲ့ ပရ​လောက ဝိညာဉ်​( တ​စ္ဆေ ​ သရဲ ပုံရိပ်​များ)
CCTV မှတ်​တမ်းထဲမှာ ကျန်​ရှိ​နေခဲ့တဲ့ ပရ​လောက ဝိညာဉ်​( တ​စ္ဆေ ​ သရဲ ပုံရိပ်​များ) Heart Hunter 16 Dec 2018 · 940 views
ကိုးတန်းမှာ သုံး​ကောင်​.. ဆယ်​တန်းမှာ တစ်​​ကောင်​.. စုစု​ပေါင်း ​လေး​ကောင်​ကို က​လေး​တွေ သင်​ရတယ်​။ ဘာ​တွေလဲဆို​တော့ Protozoa ​တွေ​ပေါ့။ သူတို့ကို သီးခြား Protista ​လောကမှာ ထည့်​သွင်းထား​ပေမယ့်​ အံ့သြစရာ​ကောင်းတဲ့ ဆဲလ်​တစ်​လုံးတည်းပါသက်​ရှိ​တွေပါပဲ။ ကိုယ်​တိုင်​အစာချက်​စားသူ ရှိသလို သူတို့ကို အမဲလိုက်​တဲ့ Protist ​တွေလည်းရှိ​သေးသတဲ့။ ဆန်းကြယ်​လိုက်​ပါဘိ။ ကြည့်​လိုက်​ရ​အောင်​​ဗျာ။
ကိုးတန်းမှာ သုံး​ကောင်​.. ဆယ်​တန်းမှာ တစ်​​ကောင်​.. စုစု​ပေါင်း ​လေး​ကောင်​ကို က​လေး​တွေ သင်​ရတယ်​။ ဘာ​တွေလဲဆို​တော့ Protozoa ​တွေ​ပေါ့။ သူတို့ကို သီးခြား Protista ​လောကမှာ ထည့်​သွင်းထား​ပေမယ့်​ အံ့သြစရာ​ကောင်းတဲ့ ဆဲလ်​တစ်​လုံးတည်းပါသက်​ရှိ​တွေပါပဲ။ ကိုယ်​တိုင်​အစာချက်​စားသူ ရှိသလို သူတို့ကို အမဲလိုက်​တဲ့ Protist ​တွေလည်းရှိ​သေးသတဲ့။ ဆန်းကြယ်​လိုက်​ပါဘိ။ ကြည့်​လိုက်​ရ​အောင်​​ဗျာ။ Dr. Kyaw Nyi Nyi Latt3May 2017 · 5.8K views
Dynamite(2015)မြန်​မာစာတန်းထိုး IMDb Ratings:7.1/10 Genre:Action Run Time:142mins Released Date:3rd Sep 2015 Language:Hindi Resolution:640×360 File Size:350mb ဒီတစ်​ခါ​တော့ မင်းသား​ချော မန်​ချူးဗစ်​ရှနူး နဲ့ မင်းသမီး​ချော ပရာနစ်​သာတို့ ရဲ့ အက်​ရှင်​အကြမ်းကားတစ်​ကား တင်​​ပေးလိုက်​ပါတယ်​ လူမိုက်​​တွေမိုက်​​ကြေးခွဲ​နေတဲ့​နေရာကို အမှန်​တရားဘက်​​တော်​သား လူငယ်​​လေး တစ်​​ယောက်​​ရောက်​လာပြီး ကူညီ​ပေးသွားတယ်​ သူ့ နာမည်​က ရှီဗာဂျီ အဲ့ဒီအဖြစ်​အပျက်​ကို အ​ကြောင်းစုံမြင်​လိုက်​ရလို့ ​ကောင်​မ​လေးတစ်​​ယောက်​က စိတ်​ဝင်​စားပြီး သူ့ ကိုလာမိတ်​ဆက်​တယ်​ ​ကောင်​မ​လေး နာမည်​က အန်​နာမီကာ. . . သူငယ်​ချင်း​တွေ​မြှောက်​​ပေးမှုနဲ့ သူတို့ နှစ်​​ယောက်​ ပထမဆုံးချိန်း​တွေ့ကြတယ်​ အားလုံးအဆင်​​ပြေ​ချော​မွေ့စွာနဲ့ အန်​နာမီကာ့ကို အိမ်​လိုက်​ပို့ ချိန်​ အန်​နာမီကာတစ်​​ယောက်​ လူဆိုးတစ်​သိုက်​ရဲ့ ပြန်​​ပေးဆွဲခြင်း ခံလိုက်​ရတယ်​ ရှီ​ဗာဂျီဟာ သူ့ ကိုကယ်​ဖို့လူဆိုး​တွေ​နောက်​ကို လိုက်​ရင်း ပြန်​​ပေးဆွဲမှုရဲ့​နောက်​ကွယ်​က အ​ကြောင်းတရား​တွေ တစ်​စတစ်​စ သိလာရတယ်​ ဒီကိစ္စရဲ့​နောက်​ကွယ်​မှာ နိုင်​ငံ​ကျော်​မင်းသမီး နီဟာရှာမားအသတ်​ခံရမှုပါ ပါဝင်​ပက်​သက်​​နေတာကို သိလိုက်​ရတဲ့အခါ. . . အန်​နာမီကာ ဘာ​ကြောင့်​ ပြန်​​ပေးအဆွဲခံရတာလဲ အစိုးရ အရာရှိပိုင်း​တွေနဲ့​ရော ဘယ်​လိုပါဝင်​ပက်​သက်​​နေတာလဲ ရှီဗာဂျီတစ်​​ယောက်​ အန်​နာမီကာ့ကို ကယ်​တင်​နိုင်​မလား အကြမ်းကြိုက်​တဲ့ ပရိတ်​သတ်​​တွေအတွက်​ Ratings လည်းမြင့်​ပြီး ဇာတ်​လမ်းအဆုံးအထိ ဆွဲ​ဆောင်​သွား​စေမယ့်​ အက်​ရှင်​ကား တစ်​ကားဖြစ်​လို့ အား​ပေးကြပါဦး ခင်​ဗျာ. .
Dynamite(2015)မြန်​မာစာတန်းထိုး IMDb Ratings:7.1/10 Genre:Action Run Time:142mins Released Date:3rd Sep 2015 Language:Hindi Resolution:640×360 File Size:350mb ဒီတစ်​ခါ​တော့ မင်းသား​ချော မန်​ချူးဗစ်​ရှနူး နဲ့ မင်းသမီး​ချော ပရာနစ်​သာတို့ ရဲ့ အက်​ရှင်​အကြမ်းကားတစ်​ကား တင်​​ပေးလိုက်​ပါတယ်​ လူမိုက်​​တွေမိုက်​​ကြေးခွဲ​နေတဲ့​နေရာကို အမှန်​တရားဘက်​​တော်​သား လူငယ်​​လေး တစ်​​ယောက်​​ရောက်​လာပြီး ကူညီ​ပေးသွားတယ်​ သူ့ နာမည်​က ရှီဗာဂျီ အဲ့ဒီအဖြစ်​အပျက်​ကို အ​ကြောင်းစုံမြင်​လိုက်​ရလို့ ​ကောင်​မ​လေးတစ်​​ယောက်​က စိတ်​ဝင်​စားပြီး သူ့ ကိုလာမိတ်​ဆက်​တယ်​ ​ကောင်​မ​လေး နာမည်​က အန်​နာမီကာ. . . သူငယ်​ချင်း​တွေ​မြှောက်​​ပေးမှုနဲ့ သူတို့ နှစ်​​ယောက်​ ပထမဆုံးချိန်း​တွေ့ကြတယ်​ အားလုံးအဆင်​​ပြေ​ချော​မွေ့စွာနဲ့ အန်​နာမီကာ့ကို အိမ်​လိုက်​ပို့ ချိန်​ အန်​နာမီကာတစ်​​ယောက်​ လူဆိုးတစ်​သိုက်​ရဲ့ ပြန်​​ပေးဆွဲခြင်း ခံလိုက်​ရတယ်​ ရှီ​ဗာဂျီဟာ သူ့ ကိုကယ်​ဖို့လူဆိုး​တွေ​နောက်​ကို လိုက်​ရင်း ပြန်​​ပေးဆွဲမှုရဲ့​နောက်​ကွယ်​က အ​ကြောင်းတရား​တွေ တစ်​စတစ်​စ သိလာရတယ်​ ဒီကိစ္စရဲ့​နောက်​ကွယ်​မှာ နိုင်​ငံ​ကျော်​မင်းသမီး နီဟာရှာမားအသတ်​ခံရမှုပါ ပါဝင်​ပက်​သက်​​နေတာကို သိလိုက်​ရတဲ့အခါ. . . အန်​နာမီကာ ဘာ​ကြောင့်​ ပြန်​​ပေးအဆွဲခံရတာလဲ အစိုးရ အရာရှိပိုင်း​တွေနဲ့​ရော ဘယ်​လိုပါဝင်​ပက်​သက်​​နေတာလဲ ရှီဗာဂျီတစ်​​ယောက်​ အန်​နာမီကာ့ကို ကယ်​တင်​နိုင်​မလား အကြမ်းကြိုက်​တဲ့ ပရိတ်​သတ်​​တွေအတွက်​ Ratings လည်းမြင့်​ပြီး ဇာတ်​လမ်းအဆုံးအထိ ဆွဲ​ဆောင်​သွား​စေမယ့်​ အက်​ရှင်​ကား တစ်​ကားဖြစ်​လို့ အား​ပေးကြပါဦး ခင်​ဗျာ. . အောင်ပန်မြို့ မြန်မာစားထိုး move 10 Jan 2018 · 107K views
“ သီလပျက်စီးသူတို့ ရောက်ရှိခံစားကြရာ ငရဲဘုံနှင့်ငရဲသားတို့ဘ၀ ” “ သီလပျက်စီးသူတို့ ရောက်ရှိခံစားကြရာ ငရဲဘုံနှင့်ငရဲသားတို့ဘ၀ ” ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• “ လူ့ဘ၀နေစဉ်မှာ...ကာမဂုဏ် ၅-ပါးကို လွန်ကျွံစွာခံစားပြီး၊ ငါးပါးသီလကျိုးပေါက်ပျက်စီးကြကုန်သောသူတို့၏ ရောက်ရှိ ခံစားရာ ငရဲဘုံရှိငရဲသားတို့ဘ၀ကို ဖော်ကျူးဖန်တီးထားတဲ့ ဗီဒီယို ဖိုင်ပါ။ တကယ့်ငရဲဘ၀မှာတော့ ဒီထဲကထက် အဆပေါင်းများစွာ ပိုဆင်းရဲနိုင်ပါတယ်။ ဤAnimation Video ကိုကြည့်ရင်း တရား သံဝေဂပွားကာဘ၀တိုတိုလေးအတွင်းမှာ - တတ်စွမ်းသမျှဒါနမှု၊ အထူးသဖြင့် သီလမှု၊ သမထ၊ ၀ိပဿနာကောင်းမှုတို့ကို ပြုဆောင် နိုင်ကြရန်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ပါသည်။ ” - ဗုဒ္ဓဘာသာလူငယ်များအသင်း ( မြန်မာပြည် ) “ ငရဲကြီး ၈ ထပ် သီလစောင့်မှ လွတ်မည် ” •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ငရဲ အကြာင်း သိထားသင့်သောအရာများ ဖြစ်ပါသည်။ အကုန် ဖတ်ကြည့်စေလိုပါသည်။မသိ့သေးသူများကိုလည်းပြောပြနိုင်ပါစေ။ ပြန်လည်မျှဝေချင်းဖြင့် ကုသိုလ်ယူပါ။ အပါယ်ဟူသည် (ချမ်းသာမှု အပေါင်းမှ ကင်းဆိတ်ခြင်း) ( ပါဠိလို အပါယ =အပါရ) ((အပ+အယ) အယ=ချမ်းသာသုခမှ၊ အပ= ကင်းတာ)) မှ ဆင်းသက်လာသည်။ အပါယ် လေးဘုံ ဆိုသည့် ငရဲ၊ တိရစ္ဆာန်၊ ပြိတ္တာ၊ အသူရကာယ် ဟူ၍ရှိလေသည်။ ငရဲ အမျိုးအစား (၈) မျိုး ရှိလေသည်။ (၁) ။သိဉ္စိုး ငရဲ၊ (၂) ။ကာဠသုတ် ငရဲ၊ (၃) ။သံဃာတာ ငရဲ၊ (၄) ။ရောရုဝ ငရဲ၊ (၅) ။မဟာရောရုဝ ငရဲ၊ (၆) ။တာပန ငရဲ၊ (၇) ။မဟာ တာပန ငရဲ၊ (၈) ။အဝီစိ ငရဲ စသည်ဖြင့် ငရဲကြီး ရှစ်ထပ် ရှိသည်၊ (၁)။ သိဉ္စိုးငရဲ - ( ထပ်တလဲလဲ မလွတ်မြောက်ပဲ ခံစားရသောငရဲ ဟု အဓိပ္ပါယ် ရှိလေသည်။ ) ငရဲ၌ခံးစားရပုံ ------------- ငရဲထိန်းများက အလျှံတပြောင်ပြောင် တ၀င်းဝင်း တောက်နေသော ငရဲလက်နက်များဖြင့် ထိုး ခုတ် ရိုက်နှက်၍ သေအောင် ပြုလုပ်ကြသည်။ ငရဲခံကြသူများမှာ ထိုသို့ လက်နက်များဖြင့် ထိုးခုတ်ရိုက်နှက်၍ သေသော်လည်း တစ်ဖန်ပြန်ထပ်ရှင်သန်ကာ အရင်အတိုင်း ထပ်ကာ ထပ်ကာ ဆိုင်ရာငရဲဒုက္ခတို့ကို ငရဲသက်တမ်း မကုန်မချင်း ပြန်ခံစား နေရသည်။ ငရဲ၏သက်တမ်း ဤငရဲ၏ သက်တမ်းမှာ ထိုဘုံဘ၀၏ အနှစ်ငါးရာ ဖြစ်လေသည်။ ထိုငရဲဘုံ၏ တစ်ရက်သက်တမ်းသည် လူတို့၏နှစ်ဖြင့် အနှစ်ကိုးသန်း ဖြစ်လေသည်။တည်နေရာနှင့် အကျယ်အ၀န်းမှာ မဟာပထ၀ီမြေထု၏ အောက် ယူဇနာပေါင်း တစ်သောင်းငါးထောင် ကွာဝေး၍ ယူဇနာပေါင်း တစ်သောင်းအကျယ်အ၀န်းရှိလေသည်။ (၂)။ ကာဠသုတ်ငရဲ - ( မည်းနက်သော ကြိုးငရဲ ဟု အဓိပ္ပါယ်ရှိလေသည်။ ) ငရဲ၌ဆင်းရဲခံစားရပုံ -------------------- ငရဲထိန်းများက လက်နက်မျိုးစုံဖြင့် လိုက်၍ ခုတ်၊ ထစ်၊ ထိုး၊ ရိုက်၊ နှက်ကြသော် ငရဲသားများမှာ ကြောက်အားလန့်အားဖြင့် ပြေးလွှား ရကာ အမောဆို့၍ လဲကျသောအခါ လက်သမားဆရာများက သစ်သားများကို မည်းနက်သော သစ်မျှဉ်းကြိုးဖြင့် တိုင်းတာကာ လိုသလို ဖြတ်ကြသကဲ့သို့ ငရဲသားများ အမောဆို့ကာ လဲကျသော အခါ ငရဲထိန်းများက မည်းနက်သော ကြိုးဖြင့် လိုသလို ပုံစံမျိုး တိုင်းတာကာ လွှ ငမန်းတို့ဖြင့် ဖြတ်ကြ ပိုင်းကြလုပ်ခြင်းကို ခံကြ ရသည်။ ထိုသို့ လက်နက်များဖြင့် ပိုင်းဖြတ်၍ သေသော်လည်း တစ်ဖန်ပြန်ထပ်ရှင်သန်ကာ အရင်အတိုင်း ထပ်ကာထပ်ကာ ဆိုင်ရာ ငရဲဒုက္ခတို့ကို ငရဲသက်တမ်း မကုန်မချင်း ပြန်ခံစားနေရသည်။ ငရဲ၏သက်တမ်း --------------- ဤငရဲ၏ သက်တမ်းမှာ ထိုဘုံဘ၀၏ အနှစ်တစ်ထောင် ဖြစ်လေသည်။ ထိုငရဲဘုံ၏ တစ်ရက်သက်တမ်းသည် လူတို့၏နှစ်ဖြင့် အနှစ်သုံးကုဋ္ဋေ ခြောက်သန်း ဖြစ်လေသည်။တည်နေရာနှင့် အကျယ်အ၀န်းမှာ သိဉ္စိုး ငရဲ ၏အောက် ယူဇနာပေါင်း တစ်သောင်းငါးထောင် ပထ၀ီမြေထုအကွာတွင် တည်ရှိ၍ ယူဇနာပေါင်း တစ်သောင်းအကျယ်အ၀န်းရှိလေသည်။ (၃)။သံဃာတာငရဲ - ( သံတောင်ကြိတ် ငရဲ ဟု အဓိပ္ပါယ်ရှိလေသည်။ ) ငရဲ၌ခံစားရပုံ ------------- ငရဲမီးလျှံ တစ်ဟုန်းဟုန်း တောက်လောင်နေသော ကိုးယူဇနာမျှ ကျယ်ဝန်းသည့် ဒယ်အိုးကြီးများထဲသို့ ငရဲသားများထည့်ကာ ငရဲထိန်း များက တောင်လောက်ကြီးမားသော သံကြိတ်တုံးကြီးများနှင့် ဖိ၍ လှိမ့်သတ်ကြသည်။ ငရဲသားများမှာ အလူးအလိမ့်ကို ခံကြရသည်။ ထိုသို့ ဖိ၍ ပိ၍ သေရသော်လည်း တစ်ဖန်ပြန် ထပ်ရှင်သန်ကာ အရင် အတိုင်း ထပ်ကာထပ်ကာ ဆိုင်ရာငရဲဒုက္ခတို့ကို ငရဲသက်တမ်း မကုန် မချင်း ပြန်ခံစားနေရသည်။ ငရဲဘုံ၏သက်တမ်း ------------------ ဤငရဲ၏ သက်တမ်းမှာ ထိုဘုံဘ၀၏ အနှစ်နှစ်ထောင် ဖြစ်လေသည်။ ထိုငရဲဘုံ၏ တစ်ရက်သက်တမ်းသည် လူတို့၏နှစ်ဖြင့် အနှစ်တစ်ဆယ့် လေးကုဋ္ဋေ လေးသန်း ဖြစ်လေသည်။ ငရဲပြည်၏အကျယ်အ၀န်း ------------------------ တည်နေရာနှင့် အကျယ်အ၀န်းမှာ ကာဠသုတ်ငရဲ ၏အောက် ယူဇနာပေါင်း တစ်သောင်းငါးထောင် ပထ၀ီမြေထုအကွာတွင် တည်ရှိ၍ ယူဇနာပေါင်း တစ်သောင်းအကျယ်အ၀န်းရှိလေသည်။ (၄)။ ရောရုဝ ငရဲ - ( ငရဲမီးလျှံများ နှိပ်စက်၍ ငရဲသူ ငရဲသားများ အော်ဟစ်ငိုယိုမြည် တမ်းခြင်း ဟု အဓိပ္ပါယ်ရှိလေသည်။ ငရဲ၌ခံစားရပုံ ------------- ငရဲတစ်ခုလုံးရှိ ငရဲမီးလျှံများမှာ ငရဲသားတို့၏ မျက်စိပေါက်၊ နားပေါက်၊ နှာခေါင်းပေါက်၊ ပါးစပ်ပေါက် တို့ကို အတင်းဒရကြမ်း ၀င်ရောက် လောင်မြိုက်ခြင်းကြောင့် ငရဲသားများ ကျယ်လောင်သော အသံဖြင့် အော်ဟစ်ငိုယိုကြသော ငရဲဆင်းရဲကို ခံစားကြရပေသည်။ ထိုသို့ မီးလျှံများကြောင့် လောင်ကျွမ်း၍ သေသော်လည်း တစ်ဖန်ပြန် ထပ်ရှင်သန်ကာ အရင်အတိုင်း ထပ်ကာထပ်ကာ ဆိုင်ရာငရဲဒုက္ခတို့ကို ငရဲသက်တမ်း မကုန်မချင်း ပြန်ခံစားနေရသည်။ ငရဲ၏သက်တမ်း ----------------- ဤငရဲ၏ သက်တမ်းမှာ ထိုဘုံဘ၀၏ အနှစ်လေးထောင် ဖြစ်လေသည်။ ထိုငရဲဘုံ၏ တစ်ရက်သက်တမ်းသည် လူတို့၏နှစ်ဖြင့် အနှစ် ငါးဆယ့် ခုနှစ်ကုဋ္ဋေ ခြောက်သန်း ဖြစ်လေသည်။ တည်နေရာနှင့်အကျယ်အ၀န်း ----------------------------- တည်နေရာနှင့် အကျယ်အ၀န်းမှာ သံဃာတာငရဲ ၏အောက် ယူဇနာပေါင်း တစ်သောင်းငါးထောင် ကွာဝေး၍ ယူဇနာပေါင်း တစ်သောင်းအကျယ် အ၀န်းရှိလေသည်။ (၅)။ မဟာရောရုဝ ငရဲ = ( ငရဲမီးလျှံမှ မီးခိုးများ နှိပ်စက်၍ ငရဲသူ ငရဲသားတို့ အော်ဟစ်ငိုယိုခြင်း ဟု အဓိပ္ပါယ်ရှိလေသည်။) ငရဲပြည်တစ်ခုလုံး မှိုင်းမှိုင်းရယ်ညိုလို့ ပိတ်ဖုန်းသွားမည့်အလား အောက်မေ့ရလောက်အောင် များပြားလှပေ၏။ မီးခိုးငွေ့များသည် ငရဲသူ ငရဲသားများ၏ ဒွါရ (အပေါက်) များသို့ ၀င်စေလျက် အော်ဟစ် ငိုယိုခြင်း ခံစားရလေသည်။ ဤငရဲ၏ သက်တမ်းမှာ ထိုဘုံဘ၀၏ အနှစ်ရှစ်ထောင် ဖြစ်လေသည်။ ထိုငရဲဘုံ၏ တစ်ရက်သက်တမ်းသည် လူတို့၏နှစ်ဖြင့် အနှစ် နှစ်ရာ သုံးဆယ့်ကုဋ္ဋေလေးသန်း ဖြစ်လေသည်။ တည်နေရာနှင့် အကျယ်အ၀န်းမှာ ရောရုဝငရဲ၊ ၏အောက် ယူဇနာပေါင်း တစ်သောင်းငါးထောင် ကွာဝေး၍ ယူဇနာပေါင်း တစ်သောင်းအကျယ် အ၀န်းရှိလေသည်။ (၆)။ တာပနငရဲ = အပူလောင်ခြင်း ဟု အဓိပ္ပါယ်ရှိလေသည်။ အလျှံတစ်ပြောင်ပြောင်တောက်နေသည့် အုန်းပင်လုံးမျှရှိသည့် သံ တံကျဉ် (တံစို့) ဟု ဆိုရသောအပေါ်၌ ငရဲသူ ငရဲသားများကို အတင်း အကျပ် ထိုင်ခိုင်း၍ တစ်ကိုယ်လုံး မီးကျီမီးခဲကဲ့သို့ ရဲရဲတောက်အောင် မီးကင်ခြင်းဖြင့် ခံစားကြရပေသည်။ ထိုသို့ အသားများ မီးလောင်ကျွမ်း၍ သေသော်လည်း တစ်ဖန်ပြန် ထပ်ရှင်သန်ကာ အရင်အတိုင်း ထပ်ကာ ထပ်ကာ ဆိုင်ရာငရဲဒုက္ခတို့ကို ငရဲသက်တမ်း မကုန်မချင်း ပြန်ခံစား နေရသည်။ ဤငရဲ၏ သက်တမ်းမှာ ထိုဘုံဘ၀၏ အနှစ်တစ်သောင်းခြောက်ထောင် ဖြစ်လေသည်။ ထိုငရဲဘုံ၏ တစ်ရက်သက်တမ်းသည် လူတို့၏နှစ်ဖြင့် အနှစ်ကိုးရာနှစ်ဆယ့်ကုဋ္ဋေ ခြောက်သန်း ဖြစ်လေသည်။တည်နေရာနှင့် အကျယ်အ၀န်းမှာ မဟာရောရု ငရဲ၊ ၏အောက် ယူဇနာပေါင်း တစ်သောင်း ငါးထောင် ကွာဝေး၍ ယူဇနာပေါင်း တစ်သောင်းအကျယ်အ၀န်းရှိလေသည်။ (၇)။ မဟာ တာပနငရဲ = ( သာလွန်၍ ပူလောင်ခြင်း ဟု အဓိပ္ပါယ်ရှိလေသည်။ ) ငရဲမီးများ အလျှံတစ်ပြောင်ပြောင် တောက်လောင်နေသည့် သံတောင်ကြီး အပေါ်မှ ငရဲထိန်းများ၏ အစွမ်းသတ္တိကြောင့် မတက်ချင်သော်လည်း အတင်းတက်ခိုင်း၊ အပူလောင်ခံပြီး ငရဲသူ ငရဲသားများ တက်ကြရပေသည်။ ထိုသို့ဖြင့် အပေါ်ရောက်သည့်အခါ အောက်ခြေသို့ ပြန်တွန်းချခြင်း ခံကြ ရပေသည်။ ဤသို့ဖြင့်အကြိမ်ကြိမ် မဆုံးနိုင်ပဲ ခံစားကြရခြင်း ဖြစ်ပေသည်။ ဤငရဲ၏ သက်တမ်းမှာ အကုသိုလ်ကံ မကုန်မချင်း အန္တရကပ် တစ်ဝက် အတိဖြစ်၏။ ထိုမျှအထိ ကြာရှည်စွာ ခံကြရပေသည်။ တည်နေရာနှင့် အကျယ်အ၀န်းမှာ တာပနငရဲ ၏အောက် ယူဇနာပေါင်း တစ်သောင်းငါးထောင် ကွာဝေးသော မြေထုအရပ်၌တည်ရှိ၍ ယူဇနာပေါင်း တစ်သောင်းအကျယ်အ၀န်းရှိလေသည်။ (၈)။ အဝီစိငရဲ = ( ငရဲသူ၊ ငရဲသား၊ ငရဲမီးလျှံ၊ ဆင်းရဲဒုက္ခ (၃) မျိုးလုံး လစ်လပ်မှုမရှိ (အကြားမရှိ) တရစပ် ခံစားရခြင်း ဟု အဓိပ္ပါယ်ရှိလေသည်။ ) ငရဲသူ ငရဲသားများသည် အိုးခွက်ထဲမှ ထန်းစေ့၊ မုံ့ညင်းစေ့၊ စပါးစေ့ များကဲ့သို့ တင်းကြမ်းပြည့်ကာ အကြားအကြားခြားခြင်း မရှိသကဲ့သို့ ငရဲသူ ငရဲသားများ၏ ဆင်းရဲဒုက္ခ တစ်ပေါင်းတစ်ခုတည်း နေရာအနှံ့အပြား ခံစားကြရခြင်း ဖြစ်ပေသည်။ ဤငရဲ၏ သက်တမ်းမှာ အကုသိုလ် မကုန်မချင်း အန္တရကပ် တစ်ကပ် တိတိဖြစ်၏။ အန္တရကပ် တစ်ကပ်ဆိုသည်မှာ ဆုပ်ကပ်နှင့် တက်ကပ် တစ်စုံကို ဆိုလိုပေသည်။ ဆုတ်ကပ်ဆိုသည်မှာ အနှစ်တစ်ရာကြာတိုင်း ကြာတိုင်း တစ်နှစ်ဆုတ်သည့်နည်းဖြင့် ဆယ်နှစ်သက်တမ်းသို့ ဆုတ်ယုတ် ကျရောက်လာခြင်းကာလကို ဆုတ်ကပ်တစ်ကပ် ဖြစ်ပေသည်။ တက်ကပ်ဆိုသည်မှာ ဆယ်နှစ်သက်တမ်းမှစ၍ အသင်္ချေရ တန်းသို့ ပြန် ဆက်လာခြင်းကာလကို တက်ကပ်တစ်ကပ် ဖြစ်ပေသည်။ ၎င်းဆုတ်ကပ် တက်ကပ် နှစ်ကပ်ပေါင်းကို အန္တရကပ် တစ်ကပ်ဟုခေါ်သည်။ တည်နေရာနှင့် အကျယ်အ၀န်းမှာ မဟာ တာပန ငရဲ ၏အောက် ယူဇနာ ပေါင်း တစ်သောင်းငါးထောင် ကွာဝေး၍ ယူဇနာပေါင်း တစ်သောင်း အကျယ်အ၀န်းရှိလေသည်။ ( မှတ်ချက် = မြေပြင်မှအောက်၌ ယူဇနာပေါင်း (15000)ဝေးသောအရပ်၌ သဉ္ဖိုင်း ငရဲတည်ရှိသည်......ယင်း ငရဲအောက်ယူဇနာ..(15000)ဝေးသော အရပ်၌ ကာဠသုတ်ငရဲတည်ရှိသည်...ဤ သို့စသည်ဖြင့် တစ်ထပ်နှင့်တစ်ထပ် ယူဇနာ(15000)တစ်သောင်းငါးထောင်စီခြားလျှက်အထက်အောက်တည် နေကြသည်...။ တစ်ယူဇနာ=၁၃ မိုင်(တချို့ ၁၂ မိုင်ခွဲ နှင့်တွက်ကြသည်။) (ငရဲငယ် ၂၅၆ သွယ်) ထိုငရဲကြီး ၈ ထပ်သာမက၊ ငရဲငယ်များလည်း ငရဲကြီး၏ တစ်ဝက်စီ၏ တစ်မျက်နှာလျှင် ငရဲငယ် ရှစ် ဌာနစီ တည်ရှိပေသည်။ ငရဲကြီး တစ်ထပ်၏ ၄ မျက်နှာတွင် ငရဲငယ်ပေါင်း ၃၂ ဌာန ရှိပေသည်။ ငရဲကြီး ၆ထပ် ၌မူ ငရဲငယ်ပေါင်း ၂၅၆ ဘုံတို့ ရှိနေကြပေသည်။ ဤ ငရဲငယ်များသည် ငရဲကြီးတို့၏ မီးညွှန့် အခိုးငွေ့နှင့် ခံစားရာ အဆုံး၌ တည်ရှိနေပေသည်။ ငရဲငယ် (၈) ဌာန ဆိုသည်မှာ ---------------------------- ၁။ မီးပူငရဲ ၂။ သံပူငရဲ ၃။ ပြာပူငရဲ ၄။ ရေပူငရဲ ၅။ ကြေးနီအိုးငရဲ ၆။ ဘင်ပုတ်ငရဲ ၇။ လက်ပံတောငရဲ ၈။ ကြိမ်ပိုက်ငရဲ တို့ဖြစ်သည်။ (လောကပညတ္တိကျမ်း၌ မိန်ဆိုထားပါသည်။) “ မဟာစည်ဆရာတော်ဘုရာကြီး၏ ၀ိပဿနာရှု့နည်းအကျဉ်းချူပ်တွင် အောက်ပါအတိုင်း ငရဲ၌ ဆင်းရဲဒုက္ခအတိခံစားရပုံကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖြင့် ဖော်ပြထားပါသည်။ ငရဲဘုံ၌ ဖြစ်ရသောသတ္တ၀ါတို့၏ ကိုယ်ထည် သုံးဂါဝုတ် ပမာဏရှိ၏။ မြန်မာအတိုင်းအားဖြင့် ၄ တိုင် တာ ၈၀၀ ရှိ၏။ ငရဲထိန်းတို့သည် ထိုမျှ ကိုယ်ခန္ဓာ ကြီးမားသော ငရဲသားကို အလျှံတပြောင်ပြောင် မီးစွဲလောင်သော သံမြေပေါ်၌ ပက်လက် အိပ်စေကုန်၏။ ထို့နောက် ညဘက် လက်ဝါး၌ ထန်းလုံးခန့်ရှိ ရဲရဲတောက်သော သံတစို့ကြီးကို ရိုက်နှက်သွင်းကုန်၏။ ဘယ်ဘက် လက်ဝါး၌လည်း နည်းတူပင် ရိုက်နှက် သွင်းကုန်၏။ ညာဘက်ခြေ၊ ဘယ်ဘက်ခြေ၊ ခါး၊ လက်တို့၌လည်း နည်းတူပင် ရိုက် သွင်းကုန်၏။ ထို့အတူ မှောက်လှက် အိပ်စေ၍လည်ကောင်း၊ စောင်းလျက် အိပ်စေ၍ လည်ကောင်း၊ ငါးပါးသော ဌာနတို့၌ သံစို့ကြီးများကို ရိုက်နှက်၍ ညှင်းဆဲ နှိပ်စက်ကုန်၏။ အကုသိုလ်ကံ မကုန်သေးမချင်း ငရဲသားကား မသေနိုင်။ ဤသို့ အညှင်းဆဲခံနေရသော ငရဲသားများသည် ရဲရဲတောက်သော သံ မြေပြင်ကို မြင်ရုံမျှဖြင့်လည်း များစွာ စိတ်ဆင်းရဲရ၏။ အလွန် ကြမ်းတမ်း ရက်စက်စွာ ကြိမ်းမောင်း ပြောဆိုသောငရဲထိန်းတို့၏ အသံကို ကြားရ ၍လည်း စိတ်ဆင်းရဲရ၏။ သံမြေပြင်ပေါ်၌ အတင်းတွန်းလှဲသိပ်ခြင်း၊ မီးလောင်ခံရခြင်း၊ သံစို့ နှက်ခံရခြင်းတို့ကြောင့်လည်း အတိုင်းမသိ ကြီးစွာသော ကိုယ်ဆင်းရဲ စိတ်ဆင်းရဲတို့ကို ခံစားရ၏။ ထိုသို့သော ကာလ၌ ကယ်ပါ၊ သနားပါ၊ ချမ်းသာပေးပါ စသည်ဖြင့် မျက်ရည်ယိုစီး ငိုကြွေး မြည်တမ်းလျက် တောင်းပန်သော်လည်း မည်သူကမျှ မသနား၊ ချမ်းသာမပေးချေ။ မိဖဲ့ ဖမဲ့ ဆွေမျိုးမဲ့၊ ဆွေခင်ပွန်း မဲ့၍ တစ်ကိုယ်တည်းသာဖြစ်လျက် ညှိုးငယ်စွာနှင့် အလွန်ကြီးမားသော ဆင်းရဲတွေကို အော်မြည်ယောင်ယမ်းလျက် မိနစ်စက္ကန့်မခြားဘဲ ခံစား၍ နေရရှာလေတော့၏။ ထိုသို့သော ကာလ၌ ၀ိပဿနာအလုပ်ကို အားထုတ် ခွင့်မရနိုင်တော့ချေ။ ထို့ပြင် သံစို့ ငါးချက်နှက်၍ မသေသော ငရဲသားကို ငရဲထိန်းတို့သည် အိမ်မိုးတစ်ဖက်ခန့်ရှိသော တံစည်းပေါက်ပြားကြီးတို့ဖြင့် ရှစ်မြှောင့်ပုံ၊ ခြောက်မြှောင့်ပုံ စသည်ဖြစ်အောင် မျဉ်းပစ်၍ ရွေခုတ်ကြပြန်၏။ သွေး တို့သည် မြစ်ဖြစ်၍ စီးလေကုန်၏။ ထိုသွေးတို့မှ မီးတောက် ထပြန်၍ ရွေခုတ်ရာ ကိုယ်၌စွဲလောင်လေ၏။ အတိုင်းမသိသော ဆင်းရဲကို ခံစား ရလေ၏။ ထိုစဉ်အခါ၌ ၀ိပဿနာ အလုပ်ကို အားထုတ်ခွင့် မရနိုင်တော့ချေ။ ထိုမျှဖြင့် မသေသေးလျှင် ဇောက်ထိုးတွဲလဲ ဆွဲထား၍ ဗန်းကြီးခန့်ရှိ ပဲကွပ်တို့ဖြင့် ပါးပါးလွှာလျက် ရွေခုတ်ကြပြန်၏။ ထိုမျှဖြင့်လည်း မသေ သေးလျှင် မီးလျှံရဲရဲတောက်သော သံရထား၌ နွား မြင်းတို့ကဲ့သို့ တပ်၍ မီးကျီခဲတောင့်ကြီးပေါ်သို့ တက်စေကုန်၏။ မတက်ဘဲနေလျှင် ရဲရဲ တောက်သော သံတုတ်ကြီးများဖြင့် အပြင်းရိုက်၍ တက်စေကုန်၏။ တောင်ထိပ်သို့ရောက်လျှင် တစ်ဖန် ဆင်းစေကုန်၏။ ဤသို့ တက်ချည် ဆင်းချည် အဖန်ဖန်ပြုစေကုန်၏။ ထိုမျှဖြင့်လည်း မသေသေးလျှင် ကျိုက်ကျိုက်ဆူပွက်လျက် ရဲရဲတောက်သော လေဟကုမ္ဘီ ခေါ် သံရည် ပွက်အိုးကြီးထဲသို့ ပစ်ချလိုက်ကုန်၏။ ထိုငရဲသားသည် သံရည်ထဲ၌ ရှဲကနဲကျ၍ အမြှုပ်တစ်စီစီ ထလျက် နစ်မြှုပ်သွားရှာလေ၏။ အနှစ်သုံးသောင်းကြာမှ ငရဲအိုး၏ အောက်ဝသို့ရောက်၏။ တစ်ဖန် အနှစ် သုံးသောင်းကြာမှ ငရဲအိုး၏ အောက်နှုတ်ခမ်းသို့ရောက်လျက် ပေါ်လာ၏။ အရပ်မျက်နှာများသို့လည်း ဖီလာသွား၏။ ထမင်းအိုးပွက်သောအခါ၌ ဆန်စေ့ ကလေးများကဲ့သို့ပင်တည်း။ အတိုင်းမသိသော ဆင်းရဲမှုနှင့် ရင်ဆိုင်တွေ့နေရလေ၏။ ထိုစဉ်အခါ၌ ၀ိပဿနာအလုပ်ကို အားထုတ်ခွင့်ကိုကား မရနိုင် တော့ချေ။ ကံမကုန်သေး၍ ထိုမျှဖြင့် မသေပြန်လျှင် သံရည်ပွက်ထဲမှ ငရဲသားကို ထုတ်ယူ၍ ငရဲထိန်းတို့သည် မီးတဟုန်းဟုန်း အမြဲတောက်လောင်လျက် ရှိသော ငရဲကြီးထံသို့ ပစ်သွင်းလိုက်ကြပြန်၏။ ထိုငရဲသည်ကား အလျား အနံ အမြင့် ယူဇနာ တစ်ရာရှိလေ၏။ လေးထောင့်ညီသော သံသေတ္တာကြီးနှင့် တူ၏။ အရှေ့ဘက်နရံမှ မီးလျှံသည် အနောက်ဘက်၌ နံရံကို ဖောက်ပြီးလျှင် အပြင်ဘက်၌ ယူဇနာ တစ်ရာတိုင်အောင် ပူလောင်၏။ အနောက်နံရံ၊ တောင်နံရံ၊ မြောက်နံရံကို ဖောက်ပြီးလျှင် အပြင်ဘက်၌ ယူဇနာ တစ်ရာတိုင်အောင် ပူလောင်၏။ အနောက်နံရံ၊ တောင်နံရံ၊ အထက်သံမိုး၊ အောက်သံမြေပြင်တို့မှ မီးလျှံတို့ သည်လည်း နည်းတူချည်း ဟစ်အော်မြည်သတည်း။ ထိုငရဲကြီးအတွင်း၌ ထိုမှဤမျှ ပြေးလွှားလူးလိမ့် ဟစ်အော်မြည်တမ်းလျက် ကြီးစွာသော ဆင်းရဲ ဒုက္ခတို့ကို ခံစားရလေ၏။ နှစ်ပေါင်းများစွာကြာသော် တစ်ခါတစ်ရံ၌ ထိုငရဲကြီး၏ တံခါးဝဆီသို့ အတင်း ပြေးကြ၏။ အချို့မှာလည်း လမ်းခရီးတွင် မောပန်းလူးလိမ့်လျက်ရှိကုန်၏။ အချို့မှာ တံခါးဝသို့ ရောက်ကုန်၏။ အနှစ်သိန်းပေါင်းများစွာ ကြာလျှင် ထို တံခါးမကြီးသည် ပိတ်သွားလေသည်။ ထွက်နိုင်သော ငရဲသားသည်လည်း အပြင်သို့ ရောက်သည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် ဘင်ပုပ်ငရဲသို့ ကျသွားလေ၏။ မစင်ဘင်ပုပ်ထဲ၌ နစ်မြုပ်နေစဉ် ဆင်၏ လည်ပင်း ခန့်ရှိသော ပိုးလောက်တို့က ကိုက်ခဲစားကြလေသည်။ ထိုဘင်ပုပ်ငရဲထံမှ လွတ်ပြန်လျှင် ပြာပူငရဲ ထံသို့ ကျရောက်သွားပြန်၏။ ထိုငရဲ၌ အိမ်ထွတ်ခန့်ရှိသော မီးကျီခဲ၊ ရဲရဲတောက်သော ပြာပူတို့ဖြင့် လောင်ကျွမ်း၍ ဆင်းရဲကြီးစွာကို ခံစားရပြန်၏။ ထိုငရဲမှ လွတ်ပြန်လျှင် (လက်ပံတောငရဲ) သို့ ရောက်ပြန်၏။ လက်ပံပင် တို့မှာ ၁၆ လက်မရှည်သော ဆူးရှိကုန်၏။ ငရဲထိန်းတို့က ရိုက်နှက်၍ ထိုလက်ပံပင်တို့၌ တက်ချည် ဆင်းချည် ပြုလုပ်စေ၏။ လက်ပံဆူးတို့သည် တက်သောအခါ၌ အောက်ကိုလှည့်၍ နေကုန်၏။ ဆင်းသောအခါ၌ အထက်သို့ လှည့်၍နေကုန်၏။ ကြောက်လန့်တကြား လျင်စွာတက်ရ၊ ဆင်းရသော ငရဲသားတို့၏ ကိုယ်သည် ထိုလက်ပံဆူးတို့ဖြင့် ထိုးမိ၍ စုတ်ပြဲလျက် ရှိလေ၏။ ထိုငရဲမှ လွတ်ပြန်လျှင် (သံလျက်တောငရဲ )သို့ရောက်ပြန်၏။ ရောက်သည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် သံလျက်နှင့် တူစွာ နှစ်သွားရှိသော အရွယ်တို့သည် ကြွေ၍ ငရဲသား၏ ကိုယ်၌ကျလေကုန်၏။ လက်၊ ခြေ၊ နား၊ လျှာ၊ ကိုယ်အင်္ဂါတို့သည် အပိုင်းပိုင်း ပြတ်လေကုန်၏။ ထ၍ ပြေးပြန်လျှင် သံမြေပြင်၌ သင်းတုံး သွားတို့သည် ထွက်ပေါ်လျက် ရှိကုန်၏။ ရှေ့မှ သံတံတို့လည်း ကာရံလျက် ရှိကုန်၏။ ထိုအခါ၌ ၀ိပဿနာအလုပ်ကို အားထုတ်ခွင့်ကို မရနိုင်တော့ချေ။ထိုငရဲမှ လွတ်ပြန်လျှင် ဝေတ္တရဏီ မည်သော (ကြိမ်ချောင်းငရဲ)သို့ ကျရောက် ပြန်လေ၏။ ထိုငရဲမှာ ကျစ်ကျစ်ဆူသော အရည်အတိပြည့်၏။ သင်တုံး သွားနှင့် တူသော နွယ်များ၊ ကြာရွက်များရှိ၏။ အောက်မြေပြင်၌ သင်တုံး သွား ခင်းလျက်ရှိ၏။ ကမ်းပါးတို့၌လည်း သင်းတုံးသွားကဲ့သို့ ထက်သော ကြိမ်နွယ်များ သမန်းမြက်များရှိ၏။ ငရဲသားတို့သည် ထိုချောင်းကို ဆင်း မိလျှင် မြေပြင်မှ သင်တုံးသွားရှသောကြောင့် လည်းကောင်း ဘိုင်းခနဲ လဲရှာလေ၏။ လဲလျှင် ကျစ်ကျစ်ဆူလျက် ပူစပ်သော အရည်ထဲ၌ စုန်ချည် ဆန်ချည် မျောနေလေ၏။ ကမ်းပါး၌ရှိသော ကြိမ်သမန်းမြက် တို့ဖြင့် လည်းရှ၊ ချောင်းထဲ၌ရှိသော ကြာရွက်တို့ဖြင့်လည်း ရှ၏။ ငရဲသားတို့၏ ကိုယ်ထည် အစုတ်စုတ်အပြတ်ပြတ် ဖြစ်လေ၏။ ထိုစဉ်ခဏ၌ ၀ိပဿနာ တရားကို အားထုတ်ခွင့်ကို မရနိုင်တော့ချေ။ စုန်ချည်ဆန်ချည် မျောလျက် အတိဒုက္ခရောက်နေသော ထိုငရဲသားကို ငရဲထိန်းတွေ့လျှင် ငါးမျှားချိတ်ကြီးဖြင့် ဆွဲတင်၍ ဘာအလိုရှိသလဲဟု မေး၏။ "ထမင်းဆာသည်" ဟု ဆိုလျှင် ရဲရဲတောက်သော အတုံးအခဲဖြင့် ပြည့်သော သံခြင်းတောင်းကြီးကို ယူလာကုန်၏။ ငရဲသားသည် ကြောက် လှသောကြောင့် ပါးစပ်ကြီး အတင်းပိတ်၍ ထားရှာလေ၏။ ထိုအခါ ငရဲ ထိန်းတစ်ယောက်က ပေါက်ချွန်းကြီးနှင့် အတင်းပေါက်၍ ပါးစပ်ကို ဖွင့်၏။ အခြားငရဲထိန်းကလည်း ထိုနည်းတူပင် တစ်ဖက်မှ ပေါက်၍ ဖွင့်၏။ ထိုသို့ ဖွင့်၍ ပါးစပ်ဟင်းလင်း ပွင့်နေသော အခါ၌ ရဲရဲတောက်သော ထိုသံတုံး သံခဲတို့ကို တစ်ခုပြီးတစ်ခု ပစ်ထည့်၍ ကျွေးကြလေသည်။ ထိုသံတုံး သံခဲတို့သည် နှုတ်ခမ်း၊ လျှာ၊ အာခေါင်၊ လည်ချောင်း၊ အူတို့ကို လောင်ကျွမ်းပြီးလျှင် အောက်ဒွါရမှ ထွက်သွားကုန်၏။ "ရေငတ်သည်" ဟု ဆိုပြန်လျှင် ကျိုက်ကျိုက်ဆူပွက်သော သံရည်တို့ကို လောင်းထည့်၍ ပေးကုန်၏။ ထိုသံရည်ပူတို့သည်လည်း နည်းတူပင် လောင်၍ အောက်ဒွါရမှ ထွက်သွားရကုန်၏။ ငရဲသားသည် မသေသေးပြန်လျှင် ထိုငရဲသားကို ငရဲကြီး ထံသို့တစ်ဖန် ပစ်သွင်းလိုက်ပြန်လေ၏။ ဤသို့ဖြင့် ငရဲသားတို့ ငရဲမျိုးစုံကို ခံစားရပုံကို ကွင်းကွင်းကွက်ကွက်မြင်သာအောင် ဖွင့်ဆိုပြလေသည်ကို မှတ်သားရပါသည်။မြတ်စွာဗုဒ္ဓဘုရား ပွင့်တော်မူလာသော အခါမှ ဤဆင်းရဲဒုက္ခတို့၏ လွတ်မြောက်ရာလမ်းကို ဂရုဏာ ရှေ့ထားလမ်းပြ ညွှန်ပြတော်မူသဖြင့် များစွာသော လူ, နတ်, ဗြဟ္မာတို့သည် ကျွတ်တမ်း ၀င်ကြရ ပေသည်။ ထိုသို့ ဘုရားပွင့်ခါအချိန်မှာ ကျွတ်တမ်းမ၀င် နိုင်ခဲ့ရသော်လည်း ယခုခေတ် အချိန်အခါမှာ လူဖြစ်လာသော စာဖတ်သူတို့လည်း အထူးကံကောင်း လှသည်ကို ဖော်ပြညွှန်းဆိုနေသည့် သက်သေ အထောက်အထားများ အများ အပြားရှိနေသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သင်တို့ ကျွန်ုပ်တို့သည်.. ခဲယဉ်းခြင်း လေးမျိုး ကိုလည်း ရရှိနေပြီး တရားထူးရနိုင်တဲ့ အခွင့်ထူး လေးရပ်နှင့်လည်း ပြည့်စုံ နေပါသည်။ * ရရန် ခဲယဉ်းလှသော လူ့ဘ၀ကို ရရှိနေရ၏။ * အသက်ရှည် ကျန်းမာနေသည်။ * သူတော်ကောင်းတရားများလည်း နာကြားရသည်။ * မြတ်စွာဘုရား သာသနာနှင့်လည်း တွေ့ကြုံရသည်။ * သာသနာထွန်းကားရာ အရပ်ဒေသမှာလည်း နေထိုင်ရ၏။ * အယူမှန်သော အသိတရားရှိ၏။ * အာရုံခံ (၆) ပါးတို့သည်လည်း ကောင်းမွန် ပြည်စုံသူဖြစ်နေခြင်း တို့သည် စာဖတ်သူတို့၏ ကုသိုလ်ကံ ကောင်းမှုအထူးပင် ဖြစ်ပေတော့သည်။ ထို့ကြောင့် ရရှိလာသော ဤလူ့ဘ၀ကြီးကို အခွင့်ရေးပိုင်ပိုင် ဆုပ်ကိုင်လျက် ကျွတ်တမ်းဝင်ရန်ဘ၀မှာ ယခု မိမိတို့ ရရှိထားသော ဘ၀ပင်ဖြစ်ပါတော့သည်ဟု ကျေးဇူးရှင် သဒ္ဓမ္မရံသီရိပ်သာ ဆရာတော် အရှင်ကုဏ္ဍလာဘိဝံသ အပါအ၀င် ပညာရှိ သူတော်စင်အများက တိုက်တွန်းထားတာကို မှတ်သားရပါတယ်။ ကိုးကား - - မဟာစည် ဆရာတော်ဘုရား၏ “ ၀ိပဿနာကျင့်စဉ်အကျဉ်းချူပ် ” - သဒ္ဓမ္မရံသီရိပ်သာဆရာတော်၏ “ ယခုဘ၀ ကောင်းမြတ်လှ ” - သု (သဒ္ဓမ္မရံသီ) ၏ “ ချစ်တတ်အောင်သင် ” - ချမ်းမြေ့ဆရာတော် ၏ “ဆင်းရဲငြိမ်းအေး ချမ်းသာရေး
“ သီလပျက်စီးသူတို့ ရောက်ရှိခံစားကြရာ ငရဲဘုံနှင့်ငရဲသားတို့ဘ၀ ” “ သီလပျက်စီးသူတို့ ရောက်ရှိခံစားကြရာ ငရဲဘုံနှင့်ငရဲသားတို့ဘ၀ ” ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• “ လူ့ဘ၀နေစဉ်မှာ...ကာမဂုဏ် ၅-ပါးကို လွန်ကျွံစွာခံစားပြီး၊ ငါးပါးသီလကျိုးပေါက်ပျက်စီးကြကုန်သောသူတို့၏ ရောက်ရှိ ခံစားရာ ငရဲဘုံရှိငရဲသားတို့ဘ၀ကို ဖော်ကျူးဖန်တီးထားတဲ့ ဗီဒီယို ဖိုင်ပါ။ တကယ့်ငရဲဘ၀မှာတော့ ဒီထဲကထက် အဆပေါင်းများစွာ ပိုဆင်းရဲနိုင်ပါတယ်။ ဤAnimation Video ကိုကြည့်ရင်း တရား သံဝေဂပွားကာဘ၀တိုတိုလေးအတွင်းမှာ - တတ်စွမ်းသမျှဒါနမှု၊ အထူးသဖြင့် သီလမှု၊ သမထ၊ ၀ိပဿနာကောင်းမှုတို့ကို ပြုဆောင် နိုင်ကြရန်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ပါသည်။ ” - ဗုဒ္ဓဘာသာလူငယ်များအသင်း ( မြန်မာပြည် ) “ ငရဲကြီး ၈ ထပ် သီလစောင့်မှ လွတ်မည် ” •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ငရဲ အကြာင်း သိထားသင့်သောအရာများ ဖြစ်ပါသည်။ အကုန် ဖတ်ကြည့်စေလိုပါသည်။မသိ့သေးသူများကိုလည်းပြောပြနိုင်ပါစေ။ ပြန်လည်မျှဝေချင်းဖြင့် ကုသိုလ်ယူပါ။ အပါယ်ဟူသည် (ချမ်းသာမှု အပေါင်းမှ ကင်းဆိတ်ခြင်း) ( ပါဠိလို အပါယ =အပါရ) ((အပ+အယ) အယ=ချမ်းသာသုခမှ၊ အပ= ကင်းတာ)) မှ ဆင်းသက်လာသည်။ အပါယ် လေးဘုံ ဆိုသည့် ငရဲ၊ တိရစ္ဆာန်၊ ပြိတ္တာ၊ အသူရကာယ် ဟူ၍ရှိလေသည်။ ငရဲ အမျိုးအစား (၈) မျိုး ရှိလေသည်။ (၁) ။သိဉ္စိုး ငရဲ၊ (၂) ။ကာဠသုတ် ငရဲ၊ (၃) ။သံဃာတာ ငရဲ၊ (၄) ။ရောရုဝ ငရဲ၊ (၅) ။မဟာရောရုဝ ငရဲ၊ (၆) ။တာပန ငရဲ၊ (၇) ။မဟာ တာပန ငရဲ၊ (၈) ။အဝီစိ ငရဲ စသည်ဖြင့် ငရဲကြီး ရှစ်ထပ် ရှိသည်၊ (၁)။ သိဉ္စိုးငရဲ - ( ထပ်တလဲလဲ မလွတ်မြောက်ပဲ ခံစားရသောငရဲ ဟု အဓိပ္ပါယ် ရှိလေသည်။ ) ငရဲ၌ခံးစားရပုံ ------------- ငရဲထိန်းများက အလျှံတပြောင်ပြောင် တ၀င်းဝင်း တောက်နေသော ငရဲလက်နက်များဖြင့် ထိုး ခုတ် ရိုက်နှက်၍ သေအောင် ပြုလုပ်ကြသည်။ ငရဲခံကြသူများမှာ ထိုသို့ လက်နက်များဖြင့် ထိုးခုတ်ရိုက်နှက်၍ သေသော်လည်း တစ်ဖန်ပြန်ထပ်ရှင်သန်ကာ အရင်အတိုင်း ထပ်ကာ ထပ်ကာ ဆိုင်ရာငရဲဒုက္ခတို့ကို ငရဲသက်တမ်း မကုန်မချင်း ပြန်ခံစား နေရသည်။ ငရဲ၏သက်တမ်း ဤငရဲ၏ သက်တမ်းမှာ ထိုဘုံဘ၀၏ အနှစ်ငါးရာ ဖြစ်လေသည်။ ထိုငရဲဘုံ၏ တစ်ရက်သက်တမ်းသည် လူတို့၏နှစ်ဖြင့် အနှစ်ကိုးသန်း ဖြစ်လေသည်။တည်နေရာနှင့် အကျယ်အ၀န်းမှာ မဟာပထ၀ီမြေထု၏ အောက် ယူဇနာပေါင်း တစ်သောင်းငါးထောင် ကွာဝေး၍ ယူဇနာပေါင်း တစ်သောင်းအကျယ်အ၀န်းရှိလေသည်။ (၂)။ ကာဠသုတ်ငရဲ - ( မည်းနက်သော ကြိုးငရဲ ဟု အဓိပ္ပါယ်ရှိလေသည်။ ) ငရဲ၌ဆင်းရဲခံစားရပုံ -------------------- ငရဲထိန်းများက လက်နက်မျိုးစုံဖြင့် လိုက်၍ ခုတ်၊ ထစ်၊ ထိုး၊ ရိုက်၊ နှက်ကြသော် ငရဲသားများမှာ ကြောက်အားလန့်အားဖြင့် ပြေးလွှား ရကာ အမောဆို့၍ လဲကျသောအခါ လက်သမားဆရာများက သစ်သားများကို မည်းနက်သော သစ်မျှဉ်းကြိုးဖြင့် တိုင်းတာကာ လိုသလို ဖြတ်ကြသကဲ့သို့ ငရဲသားများ အမောဆို့ကာ လဲကျသော အခါ ငရဲထိန်းများက မည်းနက်သော ကြိုးဖြင့် လိုသလို ပုံစံမျိုး တိုင်းတာကာ လွှ ငမန်းတို့ဖြင့် ဖြတ်ကြ ပိုင်းကြလုပ်ခြင်းကို ခံကြ ရသည်။ ထိုသို့ လက်နက်များဖြင့် ပိုင်းဖြတ်၍ သေသော်လည်း တစ်ဖန်ပြန်ထပ်ရှင်သန်ကာ အရင်အတိုင်း ထပ်ကာထပ်ကာ ဆိုင်ရာ ငရဲဒုက္ခတို့ကို ငရဲသက်တမ်း မကုန်မချင်း ပြန်ခံစားနေရသည်။ ငရဲ၏သက်တမ်း --------------- ဤငရဲ၏ သက်တမ်းမှာ ထိုဘုံဘ၀၏ အနှစ်တစ်ထောင် ဖြစ်လေသည်။ ထိုငရဲဘုံ၏ တစ်ရက်သက်တမ်းသည် လူတို့၏နှစ်ဖြင့် အနှစ်သုံးကုဋ္ဋေ ခြောက်သန်း ဖြစ်လေသည်။တည်နေရာနှင့် အကျယ်အ၀န်းမှာ သိဉ္စိုး ငရဲ ၏အောက် ယူဇနာပေါင်း တစ်သောင်းငါးထောင် ပထ၀ီမြေထုအကွာတွင် တည်ရှိ၍ ယူဇနာပေါင်း တစ်သောင်းအကျယ်အ၀န်းရှိလေသည်။ (၃)။သံဃာတာငရဲ - ( သံတောင်ကြိတ် ငရဲ ဟု အဓိပ္ပါယ်ရှိလေသည်။ ) ငရဲ၌ခံစားရပုံ ------------- ငရဲမီးလျှံ တစ်ဟုန်းဟုန်း တောက်လောင်နေသော ကိုးယူဇနာမျှ ကျယ်ဝန်းသည့် ဒယ်အိုးကြီးများထဲသို့ ငရဲသားများထည့်ကာ ငရဲထိန်း များက တောင်လောက်ကြီးမားသော သံကြိတ်တုံးကြီးများနှင့် ဖိ၍ လှိမ့်သတ်ကြသည်။ ငရဲသားများမှာ အလူးအလိမ့်ကို ခံကြရသည်။ ထိုသို့ ဖိ၍ ပိ၍ သေရသော်လည်း တစ်ဖန်ပြန် ထပ်ရှင်သန်ကာ အရင် အတိုင်း ထပ်ကာထပ်ကာ ဆိုင်ရာငရဲဒုက္ခတို့ကို ငရဲသက်တမ်း မကုန် မချင်း ပြန်ခံစားနေရသည်။ ငရဲဘုံ၏သက်တမ်း ------------------ ဤငရဲ၏ သက်တမ်းမှာ ထိုဘုံဘ၀၏ အနှစ်နှစ်ထောင် ဖြစ်လေသည်။ ထိုငရဲဘုံ၏ တစ်ရက်သက်တမ်းသည် လူတို့၏နှစ်ဖြင့် အနှစ်တစ်ဆယ့် လေးကုဋ္ဋေ လေးသန်း ဖြစ်လေသည်။ ငရဲပြည်၏အကျယ်အ၀န်း ------------------------ တည်နေရာနှင့် အကျယ်အ၀န်းမှာ ကာဠသုတ်ငရဲ ၏အောက် ယူဇနာပေါင်း တစ်သောင်းငါးထောင် ပထ၀ီမြေထုအကွာတွင် တည်ရှိ၍ ယူဇနာပေါင်း တစ်သောင်းအကျယ်အ၀န်းရှိလေသည်။ (၄)။ ရောရုဝ ငရဲ - ( ငရဲမီးလျှံများ နှိပ်စက်၍ ငရဲသူ ငရဲသားများ အော်ဟစ်ငိုယိုမြည် တမ်းခြင်း ဟု အဓိပ္ပါယ်ရှိလေသည်။ ငရဲ၌ခံစားရပုံ ------------- ငရဲတစ်ခုလုံးရှိ ငရဲမီးလျှံများမှာ ငရဲသားတို့၏ မျက်စိပေါက်၊ နားပေါက်၊ နှာခေါင်းပေါက်၊ ပါးစပ်ပေါက် တို့ကို အတင်းဒရကြမ်း ၀င်ရောက် လောင်မြိုက်ခြင်းကြောင့် ငရဲသားများ ကျယ်လောင်သော အသံဖြင့် အော်ဟစ်ငိုယိုကြသော ငရဲဆင်းရဲကို ခံစားကြရပေသည်။ ထိုသို့ မီးလျှံများကြောင့် လောင်ကျွမ်း၍ သေသော်လည်း တစ်ဖန်ပြန် ထပ်ရှင်သန်ကာ အရင်အတိုင်း ထပ်ကာထပ်ကာ ဆိုင်ရာငရဲဒုက္ခတို့ကို ငရဲသက်တမ်း မကုန်မချင်း ပြန်ခံစားနေရသည်။ ငရဲ၏သက်တမ်း ----------------- ဤငရဲ၏ သက်တမ်းမှာ ထိုဘုံဘ၀၏ အနှစ်လေးထောင် ဖြစ်လေသည်။ ထိုငရဲဘုံ၏ တစ်ရက်သက်တမ်းသည် လူတို့၏နှစ်ဖြင့် အနှစ် ငါးဆယ့် ခုနှစ်ကုဋ္ဋေ ခြောက်သန်း ဖြစ်လေသည်။ တည်နေရာနှင့်အကျယ်အ၀န်း ----------------------------- တည်နေရာနှင့် အကျယ်အ၀န်းမှာ သံဃာတာငရဲ ၏အောက် ယူဇနာပေါင်း တစ်သောင်းငါးထောင် ကွာဝေး၍ ယူဇနာပေါင်း တစ်သောင်းအကျယ် အ၀န်းရှိလေသည်။ (၅)။ မဟာရောရုဝ ငရဲ = ( ငရဲမီးလျှံမှ မီးခိုးများ နှိပ်စက်၍ ငရဲသူ ငရဲသားတို့ အော်ဟစ်ငိုယိုခြင်း ဟု အဓိပ္ပါယ်ရှိလေသည်။) ငရဲပြည်တစ်ခုလုံး မှိုင်းမှိုင်းရယ်ညိုလို့ ပိတ်ဖုန်းသွားမည့်အလား အောက်မေ့ရလောက်အောင် များပြားလှပေ၏။ မီးခိုးငွေ့များသည် ငရဲသူ ငရဲသားများ၏ ဒွါရ (အပေါက်) များသို့ ၀င်စေလျက် အော်ဟစ် ငိုယိုခြင်း ခံစားရလေသည်။ ဤငရဲ၏ သက်တမ်းမှာ ထိုဘုံဘ၀၏ အနှစ်ရှစ်ထောင် ဖြစ်လေသည်။ ထိုငရဲဘုံ၏ တစ်ရက်သက်တမ်းသည် လူတို့၏နှစ်ဖြင့် အနှစ် နှစ်ရာ သုံးဆယ့်ကုဋ္ဋေလေးသန်း ဖြစ်လေသည်။ တည်နေရာနှင့် အကျယ်အ၀န်းမှာ ရောရုဝငရဲ၊ ၏အောက် ယူဇနာပေါင်း တစ်သောင်းငါးထောင် ကွာဝေး၍ ယူဇနာပေါင်း တစ်သောင်းအကျယ် အ၀န်းရှိလေသည်။ (၆)။ တာပနငရဲ = အပူလောင်ခြင်း ဟု အဓိပ္ပါယ်ရှိလေသည်။ အလျှံတစ်ပြောင်ပြောင်တောက်နေသည့် အုန်းပင်လုံးမျှရှိသည့် သံ တံကျဉ် (တံစို့) ဟု ဆိုရသောအပေါ်၌ ငရဲသူ ငရဲသားများကို အတင်း အကျပ် ထိုင်ခိုင်း၍ တစ်ကိုယ်လုံး မီးကျီမီးခဲကဲ့သို့ ရဲရဲတောက်အောင် မီးကင်ခြင်းဖြင့် ခံစားကြရပေသည်။ ထိုသို့ အသားများ မီးလောင်ကျွမ်း၍ သေသော်လည်း တစ်ဖန်ပြန် ထပ်ရှင်သန်ကာ အရင်အတိုင်း ထပ်ကာ ထပ်ကာ ဆိုင်ရာငရဲဒုက္ခတို့ကို ငရဲသက်တမ်း မကုန်မချင်း ပြန်ခံစား နေရသည်။ ဤငရဲ၏ သက်တမ်းမှာ ထိုဘုံဘ၀၏ အနှစ်တစ်သောင်းခြောက်ထောင် ဖြစ်လေသည်။ ထိုငရဲဘုံ၏ တစ်ရက်သက်တမ်းသည် လူတို့၏နှစ်ဖြင့် အနှစ်ကိုးရာနှစ်ဆယ့်ကုဋ္ဋေ ခြောက်သန်း ဖြစ်လေသည်။တည်နေရာနှင့် အကျယ်အ၀န်းမှာ မဟာရောရု ငရဲ၊ ၏အောက် ယူဇနာပေါင်း တစ်သောင်း ငါးထောင် ကွာဝေး၍ ယူဇနာပေါင်း တစ်သောင်းအကျယ်အ၀န်းရှိလေသည်။ (၇)။ မဟာ တာပနငရဲ = ( သာလွန်၍ ပူလောင်ခြင်း ဟု အဓိပ္ပါယ်ရှိလေသည်။ ) ငရဲမီးများ အလျှံတစ်ပြောင်ပြောင် တောက်လောင်နေသည့် သံတောင်ကြီး အပေါ်မှ ငရဲထိန်းများ၏ အစွမ်းသတ္တိကြောင့် မတက်ချင်သော်လည်း အတင်းတက်ခိုင်း၊ အပူလောင်ခံပြီး ငရဲသူ ငရဲသားများ တက်ကြရပေသည်။ ထိုသို့ဖြင့် အပေါ်ရောက်သည့်အခါ အောက်ခြေသို့ ပြန်တွန်းချခြင်း ခံကြ ရပေသည်။ ဤသို့ဖြင့်အကြိမ်ကြိမ် မဆုံးနိုင်ပဲ ခံစားကြရခြင်း ဖြစ်ပေသည်။ ဤငရဲ၏ သက်တမ်းမှာ အကုသိုလ်ကံ မကုန်မချင်း အန္တရကပ် တစ်ဝက် အတိဖြစ်၏။ ထိုမျှအထိ ကြာရှည်စွာ ခံကြရပေသည်။ တည်နေရာနှင့် အကျယ်အ၀န်းမှာ တာပနငရဲ ၏အောက် ယူဇနာပေါင်း တစ်သောင်းငါးထောင် ကွာဝေးသော မြေထုအရပ်၌တည်ရှိ၍ ယူဇနာပေါင်း တစ်သောင်းအကျယ်အ၀န်းရှိလေသည်။ (၈)။ အဝီစိငရဲ = ( ငရဲသူ၊ ငရဲသား၊ ငရဲမီးလျှံ၊ ဆင်းရဲဒုက္ခ (၃) မျိုးလုံး လစ်လပ်မှုမရှိ (အကြားမရှိ) တရစပ် ခံစားရခြင်း ဟု အဓိပ္ပါယ်ရှိလေသည်။ ) ငရဲသူ ငရဲသားများသည် အိုးခွက်ထဲမှ ထန်းစေ့၊ မုံ့ညင်းစေ့၊ စပါးစေ့ များကဲ့သို့ တင်းကြမ်းပြည့်ကာ အကြားအကြားခြားခြင်း မရှိသကဲ့သို့ ငရဲသူ ငရဲသားများ၏ ဆင်းရဲဒုက္ခ တစ်ပေါင်းတစ်ခုတည်း နေရာအနှံ့အပြား ခံစားကြရခြင်း ဖြစ်ပေသည်။ ဤငရဲ၏ သက်တမ်းမှာ အကုသိုလ် မကုန်မချင်း အန္တရကပ် တစ်ကပ် တိတိဖြစ်၏။ အန္တရကပ် တစ်ကပ်ဆိုသည်မှာ ဆုပ်ကပ်နှင့် တက်ကပ် တစ်စုံကို ဆိုလိုပေသည်။ ဆုတ်ကပ်ဆိုသည်မှာ အနှစ်တစ်ရာကြာတိုင်း ကြာတိုင်း တစ်နှစ်ဆုတ်သည့်နည်းဖြင့် ဆယ်နှစ်သက်တမ်းသို့ ဆုတ်ယုတ် ကျရောက်လာခြင်းကာလကို ဆုတ်ကပ်တစ်ကပ် ဖြစ်ပေသည်။ တက်ကပ်ဆိုသည်မှာ ဆယ်နှစ်သက်တမ်းမှစ၍ အသင်္ချေရ တန်းသို့ ပြန် ဆက်လာခြင်းကာလကို တက်ကပ်တစ်ကပ် ဖြစ်ပေသည်။ ၎င်းဆုတ်ကပ် တက်ကပ် နှစ်ကပ်ပေါင်းကို အန္တရကပ် တစ်ကပ်ဟုခေါ်သည်။ တည်နေရာနှင့် အကျယ်အ၀န်းမှာ မဟာ တာပန ငရဲ ၏အောက် ယူဇနာ ပေါင်း တစ်သောင်းငါးထောင် ကွာဝေး၍ ယူဇနာပေါင်း တစ်သောင်း အကျယ်အ၀န်းရှိလေသည်။ ( မှတ်ချက် = မြေပြင်မှအောက်၌ ယူဇနာပေါင်း (15000)ဝေးသောအရပ်၌ သဉ္ဖိုင်း ငရဲတည်ရှိသည်......ယင်း ငရဲအောက်ယူဇနာ..(15000)ဝေးသော အရပ်၌ ကာဠသုတ်ငရဲတည်ရှိသည်...ဤ သို့စသည်ဖြင့် တစ်ထပ်နှင့်တစ်ထပ် ယူဇနာ(15000)တစ်သောင်းငါးထောင်စီခြားလျှက်အထက်အောက်တည် နေကြသည်...။ တစ်ယူဇနာ=၁၃ မိုင်(တချို့ ၁၂ မိုင်ခွဲ နှင့်တွက်ကြသည်။) (ငရဲငယ် ၂၅၆ သွယ်) ထိုငရဲကြီး ၈ ထပ်သာမက၊ ငရဲငယ်များလည်း ငရဲကြီး၏ တစ်ဝက်စီ၏ တစ်မျက်နှာလျှင် ငရဲငယ် ရှစ် ဌာနစီ တည်ရှိပေသည်။ ငရဲကြီး တစ်ထပ်၏ ၄ မျက်နှာတွင် ငရဲငယ်ပေါင်း ၃၂ ဌာန ရှိပေသည်။ ငရဲကြီး ၆ထပ် ၌မူ ငရဲငယ်ပေါင်း ၂၅၆ ဘုံတို့ ရှိနေကြပေသည်။ ဤ ငရဲငယ်များသည် ငရဲကြီးတို့၏ မီးညွှန့် အခိုးငွေ့နှင့် ခံစားရာ အဆုံး၌ တည်ရှိနေပေသည်။ ငရဲငယ် (၈) ဌာန ဆိုသည်မှာ ---------------------------- ၁။ မီးပူငရဲ ၂။ သံပူငရဲ ၃။ ပြာပူငရဲ ၄။ ရေပူငရဲ ၅။ ကြေးနီအိုးငရဲ ၆။ ဘင်ပုတ်ငရဲ ၇။ လက်ပံတောငရဲ ၈။ ကြိမ်ပိုက်ငရဲ တို့ဖြစ်သည်။ (လောကပညတ္တိကျမ်း၌ မိန်ဆိုထားပါသည်။) “ မဟာစည်ဆရာတော်ဘုရာကြီး၏ ၀ိပဿနာရှု့နည်းအကျဉ်းချူပ်တွင် အောက်ပါအတိုင်း ငရဲ၌ ဆင်းရဲဒုက္ခအတိခံစားရပုံကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖြင့် ဖော်ပြထားပါသည်။ ငရဲဘုံ၌ ဖြစ်ရသောသတ္တ၀ါတို့၏ ကိုယ်ထည် သုံးဂါဝုတ် ပမာဏရှိ၏။ မြန်မာအတိုင်းအားဖြင့် ၄ တိုင် တာ ၈၀၀ ရှိ၏။ ငရဲထိန်းတို့သည် ထိုမျှ ကိုယ်ခန္ဓာ ကြီးမားသော ငရဲသားကို အလျှံတပြောင်ပြောင် မီးစွဲလောင်သော သံမြေပေါ်၌ ပက်လက် အိပ်စေကုန်၏။ ထို့နောက် ညဘက် လက်ဝါး၌ ထန်းလုံးခန့်ရှိ ရဲရဲတောက်သော သံတစို့ကြီးကို ရိုက်နှက်သွင်းကုန်၏။ ဘယ်ဘက် လက်ဝါး၌လည်း နည်းတူပင် ရိုက်နှက် သွင်းကုန်၏။ ညာဘက်ခြေ၊ ဘယ်ဘက်ခြေ၊ ခါး၊ လက်တို့၌လည်း နည်းတူပင် ရိုက် သွင်းကုန်၏။ ထို့အတူ မှောက်လှက် အိပ်စေ၍လည်ကောင်း၊ စောင်းလျက် အိပ်စေ၍ လည်ကောင်း၊ ငါးပါးသော ဌာနတို့၌ သံစို့ကြီးများကို ရိုက်နှက်၍ ညှင်းဆဲ နှိပ်စက်ကုန်၏။ အကုသိုလ်ကံ မကုန်သေးမချင်း ငရဲသားကား မသေနိုင်။ ဤသို့ အညှင်းဆဲခံနေရသော ငရဲသားများသည် ရဲရဲတောက်သော သံ မြေပြင်ကို မြင်ရုံမျှဖြင့်လည်း များစွာ စိတ်ဆင်းရဲရ၏။ အလွန် ကြမ်းတမ်း ရက်စက်စွာ ကြိမ်းမောင်း ပြောဆိုသောငရဲထိန်းတို့၏ အသံကို ကြားရ ၍လည်း စိတ်ဆင်းရဲရ၏။ သံမြေပြင်ပေါ်၌ အတင်းတွန်းလှဲသိပ်ခြင်း၊ မီးလောင်ခံရခြင်း၊ သံစို့ နှက်ခံရခြင်းတို့ကြောင့်လည်း အတိုင်းမသိ ကြီးစွာသော ကိုယ်ဆင်းရဲ စိတ်ဆင်းရဲတို့ကို ခံစားရ၏။ ထိုသို့သော ကာလ၌ ကယ်ပါ၊ သနားပါ၊ ချမ်းသာပေးပါ စသည်ဖြင့် မျက်ရည်ယိုစီး ငိုကြွေး မြည်တမ်းလျက် တောင်းပန်သော်လည်း မည်သူကမျှ မသနား၊ ချမ်းသာမပေးချေ။ မိဖဲ့ ဖမဲ့ ဆွေမျိုးမဲ့၊ ဆွေခင်ပွန်း မဲ့၍ တစ်ကိုယ်တည်းသာဖြစ်လျက် ညှိုးငယ်စွာနှင့် အလွန်ကြီးမားသော ဆင်းရဲတွေကို အော်မြည်ယောင်ယမ်းလျက် မိနစ်စက္ကန့်မခြားဘဲ ခံစား၍ နေရရှာလေတော့၏။ ထိုသို့သော ကာလ၌ ၀ိပဿနာအလုပ်ကို အားထုတ် ခွင့်မရနိုင်တော့ချေ။ ထို့ပြင် သံစို့ ငါးချက်နှက်၍ မသေသော ငရဲသားကို ငရဲထိန်းတို့သည် အိမ်မိုးတစ်ဖက်ခန့်ရှိသော တံစည်းပေါက်ပြားကြီးတို့ဖြင့် ရှစ်မြှောင့်ပုံ၊ ခြောက်မြှောင့်ပုံ စသည်ဖြစ်အောင် မျဉ်းပစ်၍ ရွေခုတ်ကြပြန်၏။ သွေး တို့သည် မြစ်ဖြစ်၍ စီးလေကုန်၏။ ထိုသွေးတို့မှ မီးတောက် ထပြန်၍ ရွေခုတ်ရာ ကိုယ်၌စွဲလောင်လေ၏။ အတိုင်းမသိသော ဆင်းရဲကို ခံစား ရလေ၏။ ထိုစဉ်အခါ၌ ၀ိပဿနာ အလုပ်ကို အားထုတ်ခွင့် မရနိုင်တော့ချေ။ ထိုမျှဖြင့် မသေသေးလျှင် ဇောက်ထိုးတွဲလဲ ဆွဲထား၍ ဗန်းကြီးခန့်ရှိ ပဲကွပ်တို့ဖြင့် ပါးပါးလွှာလျက် ရွေခုတ်ကြပြန်၏။ ထိုမျှဖြင့်လည်း မသေ သေးလျှင် မီးလျှံရဲရဲတောက်သော သံရထား၌ နွား မြင်းတို့ကဲ့သို့ တပ်၍ မီးကျီခဲတောင့်ကြီးပေါ်သို့ တက်စေကုန်၏။ မတက်ဘဲနေလျှင် ရဲရဲ တောက်သော သံတုတ်ကြီးများဖြင့် အပြင်းရိုက်၍ တက်စေကုန်၏။ တောင်ထိပ်သို့ရောက်လျှင် တစ်ဖန် ဆင်းစေကုန်၏။ ဤသို့ တက်ချည် ဆင်းချည် အဖန်ဖန်ပြုစေကုန်၏။ ထိုမျှဖြင့်လည်း မသေသေးလျှင် ကျိုက်ကျိုက်ဆူပွက်လျက် ရဲရဲတောက်သော လေဟကုမ္ဘီ ခေါ် သံရည် ပွက်အိုးကြီးထဲသို့ ပစ်ချလိုက်ကုန်၏။ ထိုငရဲသားသည် သံရည်ထဲ၌ ရှဲကနဲကျ၍ အမြှုပ်တစ်စီစီ ထလျက် နစ်မြှုပ်သွားရှာလေ၏။ အနှစ်သုံးသောင်းကြာမှ ငရဲအိုး၏ အောက်ဝသို့ရောက်၏။ တစ်ဖန် အနှစ် သုံးသောင်းကြာမှ ငရဲအိုး၏ အောက်နှုတ်ခမ်းသို့ရောက်လျက် ပေါ်လာ၏။ အရပ်မျက်နှာများသို့လည်း ဖီလာသွား၏။ ထမင်းအိုးပွက်သောအခါ၌ ဆန်စေ့ ကလေးများကဲ့သို့ပင်တည်း။ အတိုင်းမသိသော ဆင်းရဲမှုနှင့် ရင်ဆိုင်တွေ့နေရလေ၏။ ထိုစဉ်အခါ၌ ၀ိပဿနာအလုပ်ကို အားထုတ်ခွင့်ကိုကား မရနိုင် တော့ချေ။ ကံမကုန်သေး၍ ထိုမျှဖြင့် မသေပြန်လျှင် သံရည်ပွက်ထဲမှ ငရဲသားကို ထုတ်ယူ၍ ငရဲထိန်းတို့သည် မီးတဟုန်းဟုန်း အမြဲတောက်လောင်လျက် ရှိသော ငရဲကြီးထံသို့ ပစ်သွင်းလိုက်ကြပြန်၏။ ထိုငရဲသည်ကား အလျား အနံ အမြင့် ယူဇနာ တစ်ရာရှိလေ၏။ လေးထောင့်ညီသော သံသေတ္တာကြီးနှင့် တူ၏။ အရှေ့ဘက်နရံမှ မီးလျှံသည် အနောက်ဘက်၌ နံရံကို ဖောက်ပြီးလျှင် အပြင်ဘက်၌ ယူဇနာ တစ်ရာတိုင်အောင် ပူလောင်၏။ အနောက်နံရံ၊ တောင်နံရံ၊ မြောက်နံရံကို ဖောက်ပြီးလျှင် အပြင်ဘက်၌ ယူဇနာ တစ်ရာတိုင်အောင် ပူလောင်၏။ အနောက်နံရံ၊ တောင်နံရံ၊ အထက်သံမိုး၊ အောက်သံမြေပြင်တို့မှ မီးလျှံတို့ သည်လည်း နည်းတူချည်း ဟစ်အော်မြည်သတည်း။ ထိုငရဲကြီးအတွင်း၌ ထိုမှဤမျှ ပြေးလွှားလူးလိမ့် ဟစ်အော်မြည်တမ်းလျက် ကြီးစွာသော ဆင်းရဲ ဒုက္ခတို့ကို ခံစားရလေ၏။ နှစ်ပေါင်းများစွာကြာသော် တစ်ခါတစ်ရံ၌ ထိုငရဲကြီး၏ တံခါးဝဆီသို့ အတင်း ပြေးကြ၏။ အချို့မှာလည်း လမ်းခရီးတွင် မောပန်းလူးလိမ့်လျက်ရှိကုန်၏။ အချို့မှာ တံခါးဝသို့ ရောက်ကုန်၏။ အနှစ်သိန်းပေါင်းများစွာ ကြာလျှင် ထို တံခါးမကြီးသည် ပိတ်သွားလေသည်။ ထွက်နိုင်သော ငရဲသားသည်လည်း အပြင်သို့ ရောက်သည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် ဘင်ပုပ်ငရဲသို့ ကျသွားလေ၏။ မစင်ဘင်ပုပ်ထဲ၌ နစ်မြုပ်နေစဉ် ဆင်၏ လည်ပင်း ခန့်ရှိသော ပိုးလောက်တို့က ကိုက်ခဲစားကြလေသည်။ ထိုဘင်ပုပ်ငရဲထံမှ လွတ်ပြန်လျှင် ပြာပူငရဲ ထံသို့ ကျရောက်သွားပြန်၏။ ထိုငရဲ၌ အိမ်ထွတ်ခန့်ရှိသော မီးကျီခဲ၊ ရဲရဲတောက်သော ပြာပူတို့ဖြင့် လောင်ကျွမ်း၍ ဆင်းရဲကြီးစွာကို ခံစားရပြန်၏။ ထိုငရဲမှ လွတ်ပြန်လျှင် (လက်ပံတောငရဲ) သို့ ရောက်ပြန်၏။ လက်ပံပင် တို့မှာ ၁၆ လက်မရှည်သော ဆူးရှိကုန်၏။ ငရဲထိန်းတို့က ရိုက်နှက်၍ ထိုလက်ပံပင်တို့၌ တက်ချည် ဆင်းချည် ပြုလုပ်စေ၏။ လက်ပံဆူးတို့သည် တက်သောအခါ၌ အောက်ကိုလှည့်၍ နေကုန်၏။ ဆင်းသောအခါ၌ အထက်သို့ လှည့်၍နေကုန်၏။ ကြောက်လန့်တကြား လျင်စွာတက်ရ၊ ဆင်းရသော ငရဲသားတို့၏ ကိုယ်သည် ထိုလက်ပံဆူးတို့ဖြင့် ထိုးမိ၍ စုတ်ပြဲလျက် ရှိလေ၏။ ထိုငရဲမှ လွတ်ပြန်လျှင် (သံလျက်တောငရဲ )သို့ရောက်ပြန်၏။ ရောက်သည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် သံလျက်နှင့် တူစွာ နှစ်သွားရှိသော အရွယ်တို့သည် ကြွေ၍ ငရဲသား၏ ကိုယ်၌ကျလေကုန်၏။ လက်၊ ခြေ၊ နား၊ လျှာ၊ ကိုယ်အင်္ဂါတို့သည် အပိုင်းပိုင်း ပြတ်လေကုန်၏။ ထ၍ ပြေးပြန်လျှင် သံမြေပြင်၌ သင်းတုံး သွားတို့သည် ထွက်ပေါ်လျက် ရှိကုန်၏။ ရှေ့မှ သံတံတို့လည်း ကာရံလျက် ရှိကုန်၏။ ထိုအခါ၌ ၀ိပဿနာအလုပ်ကို အားထုတ်ခွင့်ကို မရနိုင်တော့ချေ။ထိုငရဲမှ လွတ်ပြန်လျှင် ဝေတ္တရဏီ မည်သော (ကြိမ်ချောင်းငရဲ)သို့ ကျရောက် ပြန်လေ၏။ ထိုငရဲမှာ ကျစ်ကျစ်ဆူသော အရည်အတိပြည့်၏။ သင်တုံး သွားနှင့် တူသော နွယ်များ၊ ကြာရွက်များရှိ၏။ အောက်မြေပြင်၌ သင်တုံး သွား ခင်းလျက်ရှိ၏။ ကမ်းပါးတို့၌လည်း သင်းတုံးသွားကဲ့သို့ ထက်သော ကြိမ်နွယ်များ သမန်းမြက်များရှိ၏။ ငရဲသားတို့သည် ထိုချောင်းကို ဆင်း မိလျှင် မြေပြင်မှ သင်တုံးသွားရှသောကြောင့် လည်းကောင်း ဘိုင်းခနဲ လဲရှာလေ၏။ လဲလျှင် ကျစ်ကျစ်ဆူလျက် ပူစပ်သော အရည်ထဲ၌ စုန်ချည် ဆန်ချည် မျောနေလေ၏။ ကမ်းပါး၌ရှိသော ကြိမ်သမန်းမြက် တို့ဖြင့် လည်းရှ၊ ချောင်းထဲ၌ရှိသော ကြာရွက်တို့ဖြင့်လည်း ရှ၏။ ငရဲသားတို့၏ ကိုယ်ထည် အစုတ်စုတ်အပြတ်ပြတ် ဖြစ်လေ၏။ ထိုစဉ်ခဏ၌ ၀ိပဿနာ တရားကို အားထုတ်ခွင့်ကို မရနိုင်တော့ချေ။ စုန်ချည်ဆန်ချည် မျောလျက် အတိဒုက္ခရောက်နေသော ထိုငရဲသားကို ငရဲထိန်းတွေ့လျှင် ငါးမျှားချိတ်ကြီးဖြင့် ဆွဲတင်၍ ဘာအလိုရှိသလဲဟု မေး၏။ "ထမင်းဆာသည်" ဟု ဆိုလျှင် ရဲရဲတောက်သော အတုံးအခဲဖြင့် ပြည့်သော သံခြင်းတောင်းကြီးကို ယူလာကုန်၏။ ငရဲသားသည် ကြောက် လှသောကြောင့် ပါးစပ်ကြီး အတင်းပိတ်၍ ထားရှာလေ၏။ ထိုအခါ ငရဲ ထိန်းတစ်ယောက်က ပေါက်ချွန်းကြီးနှင့် အတင်းပေါက်၍ ပါးစပ်ကို ဖွင့်၏။ အခြားငရဲထိန်းကလည်း ထိုနည်းတူပင် တစ်ဖက်မှ ပေါက်၍ ဖွင့်၏။ ထိုသို့ ဖွင့်၍ ပါးစပ်ဟင်းလင်း ပွင့်နေသော အခါ၌ ရဲရဲတောက်သော ထိုသံတုံး သံခဲတို့ကို တစ်ခုပြီးတစ်ခု ပစ်ထည့်၍ ကျွေးကြလေသည်။ ထိုသံတုံး သံခဲတို့သည် နှုတ်ခမ်း၊ လျှာ၊ အာခေါင်၊ လည်ချောင်း၊ အူတို့ကို လောင်ကျွမ်းပြီးလျှင် အောက်ဒွါရမှ ထွက်သွားကုန်၏။ "ရေငတ်သည်" ဟု ဆိုပြန်လျှင် ကျိုက်ကျိုက်ဆူပွက်သော သံရည်တို့ကို လောင်းထည့်၍ ပေးကုန်၏။ ထိုသံရည်ပူတို့သည်လည်း နည်းတူပင် လောင်၍ အောက်ဒွါရမှ ထွက်သွားရကုန်၏။ ငရဲသားသည် မသေသေးပြန်လျှင် ထိုငရဲသားကို ငရဲကြီး ထံသို့တစ်ဖန် ပစ်သွင်းလိုက်ပြန်လေ၏။ ဤသို့ဖြင့် ငရဲသားတို့ ငရဲမျိုးစုံကို ခံစားရပုံကို ကွင်းကွင်းကွက်ကွက်မြင်သာအောင် ဖွင့်ဆိုပြလေသည်ကို မှတ်သားရပါသည်။မြတ်စွာဗုဒ္ဓဘုရား ပွင့်တော်မူလာသော အခါမှ ဤဆင်းရဲဒုက္ခတို့၏ လွတ်မြောက်ရာလမ်းကို ဂရုဏာ ရှေ့ထားလမ်းပြ ညွှန်ပြတော်မူသဖြင့် များစွာသော လူ, နတ်, ဗြဟ္မာတို့သည် ကျွတ်တမ်း ၀င်ကြရ ပေသည်။ ထိုသို့ ဘုရားပွင့်ခါအချိန်မှာ ကျွတ်တမ်းမ၀င် နိုင်ခဲ့ရသော်လည်း ယခုခေတ် အချိန်အခါမှာ လူဖြစ်လာသော စာဖတ်သူတို့လည်း အထူးကံကောင်း လှသည်ကို ဖော်ပြညွှန်းဆိုနေသည့် သက်သေ အထောက်အထားများ အများ အပြားရှိနေသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သင်တို့ ကျွန်ုပ်တို့သည်.. ခဲယဉ်းခြင်း လေးမျိုး ကိုလည်း ရရှိနေပြီး တရားထူးရနိုင်တဲ့ အခွင့်ထူး လေးရပ်နှင့်လည်း ပြည့်စုံ နေပါသည်။ * ရရန် ခဲယဉ်းလှသော လူ့ဘ၀ကို ရရှိနေရ၏။ * အသက်ရှည် ကျန်းမာနေသည်။ * သူတော်ကောင်းတရားများလည်း နာကြားရသည်။ * မြတ်စွာဘုရား သာသနာနှင့်လည်း တွေ့ကြုံရသည်။ * သာသနာထွန်းကားရာ အရပ်ဒေသမှာလည်း နေထိုင်ရ၏။ * အယူမှန်သော အသိတရားရှိ၏။ * အာရုံခံ (၆) ပါးတို့သည်လည်း ကောင်းမွန် ပြည်စုံသူဖြစ်နေခြင်း တို့သည် စာဖတ်သူတို့၏ ကုသိုလ်ကံ ကောင်းမှုအထူးပင် ဖြစ်ပေတော့သည်။ ထို့ကြောင့် ရရှိလာသော ဤလူ့ဘ၀ကြီးကို အခွင့်ရေးပိုင်ပိုင် ဆုပ်ကိုင်လျက် ကျွတ်တမ်းဝင်ရန်ဘ၀မှာ ယခု မိမိတို့ ရရှိထားသော ဘ၀ပင်ဖြစ်ပါတော့သည်ဟု ကျေးဇူးရှင် သဒ္ဓမ္မရံသီရိပ်သာ ဆရာတော် အရှင်ကုဏ္ဍလာဘိဝံသ အပါအ၀င် ပညာရှိ သူတော်စင်အများက တိုက်တွန်းထားတာကို မှတ်သားရပါတယ်။ ကိုးကား - - မဟာစည် ဆရာတော်ဘုရား၏ “ ၀ိပဿနာကျင့်စဉ်အကျဉ်းချူပ် ” - သဒ္ဓမ္မရံသီရိပ်သာဆရာတော်၏ “ ယခုဘ၀ ကောင်းမြတ်လှ ” - သု (သဒ္ဓမ္မရံသီ) ၏ “ ချစ်တတ်အောင်သင် ” - ချမ်းမြေ့ဆရာတော် ၏ “ဆင်းရဲငြိမ်းအေး ချမ်းသာရေး Sky Lay 23 May 2013